အိမ် - ၃ ထပ်တိုက်လေးရောင်းမည် Price in Myanmar | Myanmarkt Marketplace | Myanmarkt
အိမ် classified: ၃ ထပ်တိုက်လေးရောင်းမည်
🏡ရတနာလမ်းမကြီးအနီး ဈေးနှုန်းသင့် ၃ ထပ်တိုက်လေးရောင်းမည် 💰💰💰သိန်း...4300 ညှိနှိုင်း 💷ဘဏ်နှင့်ချိတ်ဆက်၀ယ်ယူနိုင်သည် တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ရပ်ကွက်ကောင်း သံသုမာလမ်းမ နှင့် ရတနာလမ်းမအနီး လမ်းကျယ်လမ်းသန့် လမ်းမတည့်ပေါက် 👉( 46' × 68' ) ပေကျယ်3RC + လေသာဆောင်မြက်ခင်းပါ ခြံထဲ ကား5စီးဆန့် ဂရန်မြေ အမည်ပေါက် 👉6 Master Bedrooms3Single Bedrooms ဧည့်ခန်းကျယ်/ထမင်းစားခန်း/မီးဖိုခန်း ပါကေးခင်း ပြင်ဆင်ပြီး အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ⬇⬇⬇ ☎☎☎ 09 799017250 (viber) ❗❗data ကြည့်လိုပါကတစ်ရက်ကြိုတင် ဖုန်းဆက်ပေးပါခင်ဗျာ 🌟Page တွင် မတင်ထားသော ကွန်ဒို.တိုက်ခန်း.လုံးချင်း. Data များစွာရှိသောကြောင့်... Myanmar Property အိမ်ခြံမြေ သို့. ဖုန်းဖြင့်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျ လူကြီးမင်းတို့၏အိမ်ခြံမြေ ရောင်း.ဝယ်.ငှား ကိစ္စ အရပ်ရပ်ကိုလည်း ယုံကြည်စိတ်ချစွာအပ်နှံနိုင်ပါ တယ်ခင်ဗျာ။